dimanche, 19 novembre 2017 22:06
Présidentielle 2018 : Conseil des ministres à Iavoloha
Au retour de Luanda, capitale angolaise, Hery Rajaonarimampianina a convoqué ses ministres au Palais d’Iavoloha pour un conseil ce dimanche 19 novembre 2017.
L’ordre du jour est consacré à la première lecture de l’Avant-projet de loi organique relative à l’élection du Président de la République.
dimanche, 19 novembre 2017 19:16
Nandoro Fitsarana: Dimy taona an-tranomaizina sazy mihatra no sazin’ilay tovolahy mpianatry ny oniverite
Niakatra fitsarana teto Toamasina ny alakamisy 16 novambra teo ilay raharaha fandoroana ny efitranom-pitsaran’ny Fitsarana ambony eto Toamasina nitranga ny 05 septambra 2017, izay nahavoarohirohy an-dRazafinantenaina Niola, tovolahy avy any Mandritsara, 23 taona, mpianatra Lalàna eo anivon’ny oniversiten’i Toamasina.
Tratra ambodiomby teo am-pandorana ny sezan’ny filohan’ny Fitsarana sy ny Sainam-pirenena nandritra izany izy.
Nentin-katezerana i Niola noho ny fiheverany fa mihemotra lava ny fitsarana ny sakaizany izay voarohirohy amina raharaha halatra, ka nahavita heloka be vava. Raha ny angom-baovao anefa dia diso efitranom-pitsarana nidirana i Niola ka nentin-katezerana ary nandoro ny efitranom-pitsarana faharoa ny Fitsarana ambony Toamasina ka may ny sezan’ny filohan’ny Fitsarana sy ireo Sainam-pirenena tao anatiny. Voatsara tamin’io talata io ihany ilay sakaizany saingy tamina efitranom-pitsarana hafa, nohafahan’ny fitsarana noho ny fisalasalana ilay tovovavy noho ny tsy fahampian’ny porofo tao anatin’ny antontan-taratasin’ady fanenjehana azy ho nangalatra ka nitazomana azy am-ponja vonjy maika.
dimanche, 19 novembre 2017 17:53
Hiverina manomboka ny alatsinainy 20 novambra ny fampianarana.
dimanche, 19 novembre 2017 16:16
EKAR Maria Mpanampy Soanierana: Sempotry ny lakrymôzena ny mpiangona
Nibosesika namonjy varavarana nanavotr’aina hivoaka ny Fiangonana ny Kristianina vokatry ny fofona manempotra tao am-piangonana. Ireo tonga hamonjy lamesa tamin’ny 9ora sy sasany ao amin’ny EKAR Maria Mpanampy Soanierana-Antananarivo no lasibatr'ity fofona lakrymôzena ity.
Folo minitra nialoha ny fanombohan’ny lamesa no niseho ny tranga hafahafa ity. Nisy nisafidy ny lalana nody, nifampisisika ny fivoahan’ny fiara avy ao an-tokontanin’ny Fiangonana. Maro ihany anefa ireo Kristianina niverina tao am-piangonana rehefa lefilefy ny fofona.
Vetivety foana dia tonga teny an-toerana ny Polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Mahamasina, niampy ny avy amin’ny Hery vonjy taitra ary ny Zandary avy ao Ankadilalana.
Kolonely iray no niezaka nampitony ny Kristianina. Afaka nanomboka ihany ny fotoam-pivavahana taorian’izay, na tsy ampy fifantohan-tsaina aza izany.
dimanche, 19 novembre 2017 15:33
SOS fahasalamana: Mila tolotanana i Hary
I Raivonjanahary Florine (antsoina hoe i Hary) no anaran'ity tovovavy 20 taona ity. Mpanampy tao amin'ny fianakaviana iray aty Maevatanana izy ary resy am-piainana na dia matanjaka ara-pinoana aza satria Kristiana ao amin'ny FJKM aty an-toerana.
Resy tanteraky ny fahantrana i Hary satria tsy manam-bola hitsaboana tena intsony, noho ny fahalemen'ny tapany ambany.
Iray volana teo izay no nahazahoany io aretina malemy io, niatomboka tamin'ny faharerahana, niitatra tamin'ny any amin'ny lamosina, niha-navesatra ny tongotra ary dia izao nalemy izao.
Namany iray no mba manampy azy amin'izao, dia Rtoa Razafindramavo Yvonne Esther, ary ireo fianakaviana niasany dia manao izay ho afany koa saingy tsy ampy.
dimanche, 19 novembre 2017 15:28
Vohémar: Mahazo vahana ny halatr’omby
Omby maty efa voatetika tao anaty harona miisa valo no saron’ny Zandary tao Vohémar tamin’ny 11 novambra 2017 rehefa nahazo vaovao mari-pototra avy tamin’ny olona tsara sitrapo.
Rehefa nanaovana be midina tany anaty ala tao Androjo Ampondra dia tra-tehaka teo ampitetehana ny tovolahy iray ary niaiky ny zavatra nataony izy.
Omby roa efa maty no mbola hita teo ka an'ny Benin’ny Tanàna lefitra ny iray tamin’ireo omby halatra efa maty ireto.
Tao anatin’ny famotorana natao taminy no nilazany fa aty Sambava no ivarotany ireo henan‘omby efa voatetitetika ireo ka miaraka amin’ireny fiara taxi-brousse mandeha vao maraina ireny izy.